Radarin'ny fisorohana ny sakana amin'ny drone MR72 Miaraka amin'ny haino aman-jery avo lenta amin'ny fanohanana fampiharana vaovao amin'ny alàlan'ny rindrambaiko-voafaritra-News-Hunan Nanoradar Science & amp; Technology Co., Ltd.,
Fotoana: 2021-05-24 Hits: 2
Momba ny NanoRadar:
Nanoradar, natsangana tamin'ny 2012, dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary fivarotana radara onjam-peo milimetatra ho fiarovana, UAV, fiara, fifamoivoizana an-tsaina ary fampiharana indostrialy hafa. Izahay dia nahomby tamin'ny famolavolana maodely mihoatra ny 20 radar manarona tariby matetika 24GHz, 60GHz, 77GHz, 79GHz. Amin'ny maha mpanamboatra radara MMW malaza any Sina, ny vokatra Nanoradar dia ekena tsara ihany koa amin'ny tsena any ivelany toy ny US, Korea, UK, ary France sns.
PREV: tsy misy
MANARAKA : Ny vahaolana 77GHz MMW Radar “1 + N” dia manampy amin'ny ady amin'ny viriosy Corona amin'ireo fiara mitondra otrikaretina fitifirana tsy mandeha amin'ny fiara sy robotika fanaparitahana lojika